🥇 ▷ Tim Cook wuxuu sheegay in iPhone SE uu ka dhakhso badan yahay taleefannada casriga ah ee Android ✅
Tim Cook wuxuu sheegay in iPhone SE uu ka dhakhso badan yahay taleefannada casriga ah ee Android
Laba toddobaad ka hor, Apple waxay soo bandhigtay barnaamijka cusub ee loo yaqaan ‘iPhone SE 2020.’. Haddii qiimuhu ka hooseeyo kan iPhone 11 ama iPhone 11 Pro, waa sababta oo ah iPhone SE 2020 waxay leedahay xaashi xog farsamo oo aad uyar. Si kastaba ha noqotee, sida iPhone-ka ay soo saartay Apple bishii Sebtember 2019, iPhone cusub ee SE wuxuu ku qalabeysan yahay A13 Bionic chip.
Oo sida muuqata, waxay ku jirtaa qaybtan inApple uu doonayo inuu khayaamo si uu uga duwanaado iPhone SE iyo kuwa kale ee casriga casriga ah ee ay bixiyaan soosaarayaasha qalabka Android, sida Xiaomi ama Samsung.
Qayb ka dhigaya kala duwanaanta oo dhan?
Sida lagu soo warramey goobta 9to5Mac, markii shirkada Cupertino ee sedexdii biloodba la shaaciyey, Tim Cook waxaa wax laga weydiiyay saadaasha iibka iPhone SE 2020 ee gobolada gaarka ah. Waxaana madaxa shirkaddaApple uu ku jawaabay inay rajeyneyso in iPhone SE 2020 uu si wanaagsan uga iibin doono dhammaan meelaha juqraafi ahaan, laakiin ay tahay in aaladda ay ku iibiso xitaa si ka wanaagsan waddamada dakhligoodu hooseeyo. Tim Cook wuxuu sidoo kale filan lahaa iPhone SE 2020 inuu ka dhaadhiciyo isticmaaleyaal badan oo Android ah inay u beddelaan macruufka. Sabab? , ma wuxuu caddeeyey.
Maalmo ka hor, waxaan sidoo kale la xiriirnay aragtida warbaahin ku takhasustay taleefannada casriga ah ee Android, kaasoo qirtay in iPhone SE 2020 ay ka fiican tahay moodooyinka sare ee Android, Thanks to A13 Bionic chip.
Laakiin dabcan, haddii bartanka badhtamahaApple uu leeyahay isla processor-ka sida ‘Premium iPhone’ ah, qalabku wuxuu leeyahay khaladaadyo badan meelaha kale. Tusaale ahaan, halka inta badan telefoonada casriga-dhexe ay ku leeyihiin kamarado badan dhabarka dambe, iPhone SE 2020 kaliya ayaa leh. Intaa waxaa sii dheer, moodalkani wuxuu leeyahay naqshad duug ah oo duug ah, shaashadduna waa LCD halka moodooyinka lagu iibinayo isla qiimaha ay horay u isticmaalaan teknolojiyadda OLED.